DEG DEG-Cabsi ka taagan gobolka Sanaag iyo Alshabaab oo sheegay inay la wareegeen 4 deegaan.
Wararkii ugu dambeeyey ee aanu ka helayno gobolka Sanaag ayaa sheegaya in malayshiyaad ka yimid dhanka Somaliland kana tirsan kooxda argagixsada ah ee Alshabaab ay fariisimo ka samaysteen deegaamo katirsan gobolkaasi.
Alshabaab waxa ay baraha Internetka ku shaaciyeen inay la wareegeen deegaannada kala ah Mirici, Masha-caleed, Xabaasha Aw-Cali iyo Markeet oo dhammaan hoosyimaada degmada Laas-qoray ee gobolka Sanaag.
Puntland ayaa marar badan sheegtay in Alshabaabka ka dagaalama deegaamada buuraleeyda ah ee Sanaag iyo Bari lagu soo diyaariyo ama ay Puntland ka soo galaan qaybaha ay gobolka Sanaag kaga sugan yihiin ciidanka maamulka Somaliland.
Waxa caada aha in marka aad fashilanto cid kale eeda saarto maamuulka maxamuud saleeban Marku fashilamaya aya meelkale ku eedayan kuwa Somaliland ka imanaya iyaay iyada qabsadaab
@@@ Xildhibaan Xasan-yare oo marada kasii riday Farmaajo
Wareysi xildhibaan Xasan-yare (Jubbaland) uu siiyey Somali Cable ayuu ku dhuftay wareemiddii ugu weynayd ee uu ku ruuxtogay xukuumadda Farmaajo oo duddun waxmatare ah. Googaalaysiga waxaa ka mid ‘isgaroobis isguduudis geela horsocotoon la guursan’. Waxaa lagu fasiraa duddunta. Alle baa garanaya xikmadda uu u sameeyey laakiin reer miyiga waxa ay u tartaa inay markii xooluhu ka lumaan ay koraan si ay hareeraheeda uga eegaan wax bidhaan ah. Intaas waxaa soo raaca carruurta oo tafta kuna ciyaarta.
Waxaad fahmaysaa inaan caqliga iyo xikmaddu ku xirnayn jir iyo qolof weynaan ,hadaltiro, iyo jaajaalenimo. Ninkaas dhallinyarada ah ee dhegaha dheer ee ku hadla lahjadda koonfurta fog, ee qofkii aan aqoon u maleyn lahaa miskiin dadkiisaas isaga dhexjira, Alle wuxuu ku mannaystay maskax, xusuus, aftahannimo, dhiirranaan iyo hadalkiisa iyo dooddiisa oo uu soo gudbiyo si taxan oo habeysan oo uusan waxna ka tegin waxna ku darin… Maashaa Allaah.
Waxaa kaloo aad iisoo jiidatay markii la weyddiiyey waxa uu u qabtay degaankii laga soo doortay, inuu tiriyey waxqabad aysan kuwo badan oo Xamar ka doobbiya u qaban degaannadoodii xitaa 5% ka mid ah wixii uu qabtay, balse ayba dhici karto in marka keliya ee ay degaannadooda booqdaan ay tahay xilliga doorashada.
Waxaa shaki la’aan ah in Farmaajo iyo Fahad Yaasiin ay isku dayeen inay ninkan dhallinyarada ah ku aamusiyaan laaluush ama cagojugleyn sida ay ku sameeyeen aqlabiyadda odayaasha islaamihii ka hawlgabeen iyo habraha dhalmodayska galoofka ah ku jira labada aqal Baarlamaan ku-sheegga oo ujeeddada ugu weyn ee ay meesha u yimaadeen tahay hawada kulul iyo qorraxda Somalia iyo shilimaad ay ku urursadaan xalaal iyo xaaraan hadba kii lasoo gudboonaada.
Haddii Baarlamaam ku-sheegga laga heli lahaa 10 xasan-yare oo kale ah waxaa suurtogal noqon kari lahayd in laga faa’iidaysan kari lahaa waqtigii afarta sano ee lumay isla markaana Somalia laga badbaadin kari lahaa doqonka afgarooca ah ee ku shaqeeya qorshiha gaaladii kursiga fariisisay.
Ugu dambeyn, anigu Xasan-yare ma aqaan oo social media-ha ayaan ka bartay, degaanka aan kasoo jeedo iyo kiisana waxaa u dhexeeya masaafo ah ilaa 1300km, waxaase isoo jiitay oo aan ku taageersanahay kartidiisa iyo daacadnimadiisa. Alle waxaan ugu baryayaa inuu siiyo cimri dheer iyo caafimaad uu ugu shaqeeyo dalkiisa iyo dadkiisa, kana xijaabo sharka intii isaga neceb — Soomaali iyo gaalaba.
Sidaas ayey xaaladdu noqota marka warsangeli diidan in dhulkooda ilaashadaan oo ay Shisheeye so Dhaweestaan halkii gacmaha isqabsaan laheyen Dadka kale ku nool Somaliland.
Saeed..inan gumeed. Maleyshiyaadka waa al-shabab soo dirtey maamul goboleedka Somaliland
Wa sheekadeene bariga, aaway askartii puntland ?
Al-shabaab Somalia oo Pudland Ku jirto ayaa usoo waarida Somaliland,kumase guulaysan doonaan,cagta ayaana la marinayaa,dadka Somaliland-na waa dad nabad jecel,dhaqana u lahayn mooryaanimo,is qarxin,diin lagu qadhaabto,dhul lagu qabsado,dad lagu gumaado.
Al-shabaabtii Puntland miyaa kuwani mise kuwii Koonfurta?
Kuwii Bari haday noqdaan waa Reer Puñtland,waana iska cadahay.
Somaliland iyo Alshabaab maxaa isu keenay?
Sidaas miyaa anshaxa saxaafadu?
Been abuur,dacaayad rakhiisa.